Ku daabulo bogag qurux badan, kana jawaaba daqiiqado leh LeadPages
LeadPages waa bogga degista taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku daabacdo bogag deg deg ah, deg deg ah oo jawaabo ku socda Facebook, WordPress ama boggaaga oo leh qasabno yar. Iyadoo la adeegsanayo LeadPages, waxaad si fudud ugu abuuri kartaa bogagga iibka, albaabbada soo-dhaweynta, bogagga soo degitaanka, bogagga bilowga, bogagga cadaadi, bilowga boggaga dhowaan, bogagga mahadsanid, bogagga gaariga ka hor, bogagga kor u kaca, aniga aniga bogagga, wareysiyada bogagga taxanaha ah iyo inbadan.
Waad abuuri kartaa oo aad bilaabi kartaa bogagga degitaanka adiga oo adeegsanaya qoraalkooda gundhigga ah si aad ugu martigeliso bartaada, ama u isticmaasho URL-keeda. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad leedahay degel WordPress ah, waxay leeyihiin shey aad u fiican oo aad si fudud uga dooran karto boggaaga degitaanka liiska bogagga aad daabacday. Kala-bax tijaabo ah sidoo kale hadda waxaa heli kara dhammaan macaamiisha LeadPages.
Tilmaamaha Bogga Soo Degitaanka LeadPages
Bixinta Lacagta - Samee iibso oo ka soo bixi alaabta dhijitaalka ah bog kasta oo soo degaya ama ku soo baxa Checkouts. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa Leadpages, akoon lacag la’aan ah, iyo wax aad iibiso.
Mawduucyada Moobiil-ku-habboon - Ku bilow inaad ku dhisto boggaaga 130 + bilaash ah, oo qaab-fulin heer sare ah-oo dhammaantood u shaqeeya sida ugu qurux badan ee casriga ah sida ay ugu shaqeeyaan kormeeraha desktop-ka.
Customization Jiid-iyo-Drop - Ka dhig bog kasta mid kuu gaar ah adiga oo ku tuuraya waxyaabo cusub halka aad rabto. Qoraalka, sawirada, badhannada, iyo xitaa aaladaha sida aaladaha tirinta tirinta dhammaantood meel fudud ayey ku degsadaan.
Imtixaanka A & B ee fudud & Falanqaynta - Eeg sida boggagaaga iyo foomamka xulashada ay u sameynayaan jaleeco, ka dibna ku habboon adoo dejinaya baaritaanka A / B. Waxay qaadataa dhowr guji oo keliya si loo bilaabo daahfurka waxa u shaqeeya dhagaystayaashaada.
Isdhexgalka - Ka dhig barnaamijka suuqgeynta iyo iibka ee aad horeyba u isticmaashay mid awood badan adigoo ku xiraya Leadpages. U dir xiriiro cusub liiska emaylkaaga, CRM, webinar platform, ama dhammaan waxyaabaha kor ku xusan.
Pop-Ups Qabashada Lead - Ku ururi raadadka meel kasta oo ku taal bogga oo leh foomamka Leadboxes laba-tallaabo kala-xulasho ah. Si otomatig ah ugu dar dariiqyo cusub liis kasta oo emayl ah hana u oggolow nidaamkayaga gudbinta magnet-ka ee la dhisay inuu ku degdego waxyaabaha kuugu fiican.
Xeerarka Ka-Bixitaanka SMS-ka & Xiriirinta Saxeex 1-Guji - Qabsashada ka-gaabinta meel kasta oo aad horseed u tahay waxay wataan taleefannadooda Leaddigits-waxay qaadataa oo dhan waa fudud, wada-hadal qoraal ah oo iswada SMS ah. Kadibna, u ogolow hoggaamiyeyaashu inay iska diiwaangeliyaan liisaska emailka cusub isla markaana iska diiwaan geliyaan websaydhka saxda ah sanduuqyadooda 'Leadlinks'.
LeadPages hadda waxay la midoobeysaa gawaarida wax iibsiga, suuqgeynta emailka iyo suuqgeynta suuqgeynta oo ay ku jiraan 1ShoppingCart, InfusionSoft, Mailchimp, Office Autopilot, GetResponse, Constant Contact, AWeber, GoToWebinar, 1AutomationWiz, iContact, SendReach iyo daraasiin kale.
Qiimaha qiimuhu runtii waa mid aan qaali ahayn oo ay ku jiraan bogag degitaan oo aan xad lahayn, marin u helida dhammaan tusaalooyinka, is-dhexgalka otomaatigga, is-dhexgalka WordPress, marin u helka barnaamijkooda ku xiran, iyo qandaraaska sanadlaha ah ayaa laga dhimay rukunka bil kasta.
Saxiix u samee LeadPages Hada!
Shaacinta: Aad ayaanu ula dhacnay, waanu isdiiwaan gelinay oo waxaan ku qornay qoraalkan xiriiriyeyaasha xiriirka la leh!
Tags: 1Qalabka tooska ah1ShoppingCartAWeberXiriir joogto ahGetResponsegotowebinariContactInfusionsoftbogga degistadirista boggagaboggaga soo degayaLeadPagesmailchimpbogagga degitaanka moobiilkaXafiiska Autopilotbogagga degitaanka jawaabta lehDirRachbogagga degitaanka kiniinka
Beddel Qabashada Twitter-kaaga Adigoon Waayin Kuwa Raacaya
Aug 30, 2016 at 8: 41 AM
Tani waa wax weyn. Waxay umuuqataa xal jiil hogaan adag. Waxaan la yaabanahay haddii ay la midoobi doonto qalabkeyga suuq-geynta suuq-geynta in kastoo. Waxaan isticmaalaa SendPulse oo kuma jiro liiska iskudhafka la heli karo. Isdhexgalka iyada oo loo marayo API waa macquul laakiin waa wax aan loo baahnayn.